Home Wararka Qorshe Nucee ah ayaa kadanbeeyo Kala dirida Ciidanka Nabadsugid Gobolka Banaadir(Warbixin)
Qorshe Nucee ah ayaa kadanbeeyo Kala dirida Ciidanka Nabadsugid Gobolka Banaadir(Warbixin)
Xilligii Berri-samaadka ee ay Dowladihii Rayidka iyo tii Kacaanka majaraha u hayeen Talada dalkeenna, waxay Hay’addaha Ammaanka ahaayeen kuwo Nidaamsan oo lagu jiheeyey Shaqaooyin Cayiman oo lagu xoojinayo Ammaanka iyo Nabad-sugida dalka.
Ciiddanka Nabad-sugidda oo xilligaasi la oran NNS-ta waxay ahaayeen kuwo leh Hay’ad Guud, Maamul Nidaamsan iyo Ciiddamo dhar-cad ah, kuwaasi oo si qarsoodi u gudan jirey Waajibaadkooda.
Waxaana ugu hawl adkaa Ciiddanka NSS-ta ee Dabagalka Ajaaniibta iyo Dembiyadda Qorsheysan iyo kuwa hawlahooda Xooraansiga ku koobnaa goobaha ay dadka badan isugu yimaadaan, sida Suuqyadda, Baararka, Hoteelladda iyo Goobaha kale ww Adeegyadda Ganacsiga.
Hawl-gudashadooda ayaana ahayd mid miro-dhal ah, oo aysan cid kale la wadaagi jirin, ma ahayn NSS-ta ciiddan argagax geliya Bulshadda ama geysta xad-gudubyoi kale, marka laga reebo Dembiilayaasha ay baacsiga ku hayaan iyo kuwa uu raadku soo galo.
Xilligaasi, Ciiddanka NSS-ta ma ahayn kuwo xulashadooda kooban tahay, balse waxa xubahooda laga kala keeni jirey qeybaha kala duwan Bulshadda, looma eegi jirey qaababka waayadan dambe lagu shaqaaleysiiyo.
NSS-ta ma aysan ahayd Ciiddan ku hubeysan Hubka muuqda iyo Gaadiidka Teknikadda ee lagu rakibo Qoryaha Culus, waxaana Ogaalkayga ahaayeen kuwo ku hubeysan Bistoolado, iyado oAskari kasta lagula xisaabtami jirey hubka uu ku hawl-geli jirey.
Sugidda Ammaanka oo ah Muraayadda Qaranka ayaa waxay Somalia ku kasbatay inay ka mid noqoto dalalka ugu Sirdoonka fiican, balse, tan iyo burburkii Dowladnimo waxa uu Ciiddankii NSS-ta noqday mid ku dhex milmay Xaalladihii taagnaa.
Dowladihii KMG ilaa Dowladda Federalka waxay bilaabeen Dib-u-dhiska iyo Dib-u-habaynta Ciiddankaasi oo magacii NSS-ta ee lagu yaqiinay lagu beddelay Ciiddanka Sirdoonka iyo Amniga Qaranka ee NISA,
DFS waxay xalay shaacisay in Ciiddankii NISA ee Gobalka Banaadir la kala diray, laguna wareejiyey Ciiddanka Boliska ee Gobalka Banaadir.
Qaar ka mid ah Ciiddankaasi ayaa la sheegay inay noqon doonaan kuwo dhar cad ahaan ku shaqeyn doona.
Xeeldheerayaasha Ammaanka ayaa sheegay in Nidaamkaasi yahay mid Heer Caalami ah oo la jaanqaadi kara Istaraatijiyadda rasmiga ee Ciiddankaasi loo yegleelay inay ku gutaan Hawlaha loo xil-saraay ee Ammaanka iyo Sirdoonka.
Waa hubaal in culaysyo laga dareemi karo sida ay Ciiddanka horey uga tirsanaa Taliska NISA ee Gobalka Banaadir, waxaana la filan kara qaladaad farsamo iyo caqabado kale, haddii aysan Saraakiisha Hay’addaha Ammaanka ee Khibradda leh u furin Ciiddankaasi Tababaro sare loogu qaadayo Aqoontooda iyo Hawl-fulinta cusub ee ay ugu adeegayaan Bulshadda Soomaaliyeed.
Previous articleMadaxda Ugu Sareeysa Dowlada Oo Xisbi Siyaasadeed Samesanyo(Sababta)
Next articleRW Khayre Oo Ugu Faanay Madaxda Putland inuu Shaqooyin uqabtay Shacabka Putland.
Ciidamo hor-dhac u ah Safar Farmaajo ku tagaayo Afgooye oo Howl-galo...